अब धर्म परिवर्तन गर्ने र गराउनेलाई ५ बर्षको जेल, विदेशी भए देशनिकाला – Dainik Sangalo
October 29, 2020 298
काठमाडौँ । २०६२/२०६३ को जन आन्दोलनपछि धर्म निरिपेक्षको आडमा नेपाल भित्र डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको धर्म परिवर्तनलाई अब अ, पराध मानिने र कडा सजायको भागिदार हुनु पर्ने छ । सरकारले धर्मपरिवर्तनलाई फौ, जदारी अ, पराध बनाएपछि नयाँ कानूनको एक दफामा कसैले पनि धर्मान्तरणमा संलग्न हुन वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
Nextगृह मन्त्रालयले माग्यो १०० जना कर्मचारी (सूचनासहित)
तपाईसंग पनि यी पुरानो नोटहरु छ? मूल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले बेचौं !
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43469)